မြန်မာမျိုးဟေ့ တို့မြန်မာ…။ – PoemsCorner
မြန်မာ မြန်မာ ဆိုသည်မှာ အထင်ကရ သမိုင်းနှင့် မျိုးနွယ်အခြေခံ ကြီးကြီးမှ ဆင်းသက်ပေါက်ဖွာလာသော အဆင့်အတန်းရှိသည့် လူမျိုးစု တစ်စု ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာတို့၏ ရှေ့သမိုင်းတို့သည် လည်း အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများတင်မ က ကမ္ဘာကပါ မြန်မာတို့ အကြောင်းကို သိကြလေ၏…။ သိအောင် လုပ်သောသူများကလဲ မတို့တထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းမဟုတ်၊ ဦးအောင်ဇေယျက ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ ပြည်တက်သိမ်းတယ်….။ ဘုရင်နောင်က စစ်သည်ရာမကျော်ပဲ ထောင်ချီသောရန်သူတပ်မကြီးကို ဖောင်ဖျက်ပီး ၀င်တိုက်သည်. ။အနော်ရထာက တိုင်းပြည်အတော် များများကို ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားစွာမင်းလုပ် အုပ်ချုပ်ပြီး ကမ္ဘာ့ နေရာဒေသ တော်တော်များများကို ဗုဒ္ဓသာသနာစည်ပင် ပြန့်ပွားစေခဲ့သည်…။
ထိုကဲ သို့ပဲ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး လက်ထက်တော်တွင်းလဲ အမျိုးဇတ်ကြီးမားသော မြန်မာအစသာကီဝင်မင်းမျိုးတို့သည်
အမျိုးဂုဏ်ဇတ်မြင့်မားမှုကို မျိုးနွယ်စု တစ်ခုလုံး လိုက်နာထိမ်းသိမ်းခဲ့ကြသည်…။ မြန်မာတို့၏ ဂုဏ်ပုဒ်များကို ပြောပြလျှင် တစ်ထောင် တစ်ည ပုံပြင်ထက် ပိုများပြားပေလိမ့်မည်…။
သမိုင်းတစ်လျှောက်ပြန်ကြည့် လျှင်မြန်မာတို့သည်…. ယဉ်ကျေးကြသည်…။ ခွင့်လွှတ်သည်းခံမှုအားကြီးကြသည်….။ ကိုယ့်စာပေ ၊
ကိုယ့်ဂီတ ၊ ကိုယ်ဘာသာ ဖြင့် တသီးတကန့် ရပ်တည်ခဲ့ကြသည်….။ အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော လူမျိုးစုများဖြစ်ကြသည်….။
သို့သော် ယခု မြန်မာတို့၏ ၂၁ ရာစုခေတ်ပုံသဏ္ဍန်များနှင့် ယှဉ်ကြည့်လိုက်လျှင်တော့ မြန်မာတို့၏ ပြယုဂ်များသည် ယခင်ကရှိခဲ့သော သမိုင်းနှင့် မြင့်မြတ်မှုများကို ဘယ်လို မှ ဆက်ဟပ်၍ မရနိုင်တော့ပေ….။
ယခုအချိန်တွင် ပိုးအင်္ကျီနှင့်ချိတ်ထမီအစား ကွာတာပင်နှင့် ကြိုးတစ်လုံးအင်္ကျီက နေရာယူထား၏..။ အားကောင်မောင်းသန် ၂၇
တောင်ဝတ်မင်းယောကျာင်္းတွေက ဆံပင်တွေ ကလိန်ကွေးကောက်ကာ ဖြူဖတ်ဖြူရော်မျက်နှာနဲ့ ခေတ်အခေါ် ဂျော်တကီးတွေ ဖြစ်နေကြ၏..။
ထိုကဲ့သို့ပဲ မြန်မာထမင်းဝိုင်းမှ မြန်မာတို့၏ ရိုးရာစားစရာ ငပိရည်နှင့်တို့စရာစုံစုံလင်လင်နေရာတွင် ကိုရီးယားကင်နှင့် နိုင်ငံတကာ အစားအစာများက ဥဒဟို ၀င်ထွက်နေရာယူနေကြပြီ..။
မြန်မာဂီတကို အရောအနှောများဖြင့်ပုံစံပြောင်းကာ ဗုံးတီးသံကို ဘေ့စ်သံနှင့် ပျောက်အောင်ဖျောက်နေကြသည်…။ မြန်မာရိုးရာ
အ၀တ်အစားများကို ရက်ပ်ပါအ၀တ်အစားများ ရောနှောကာ ယိမ်းအကကို ဒန့်စ်ဆွဲနေကြသည်…။ ယုတ်စွှအဆုံး အိနြေ္ဒကြီးလှသော
မြန်မာ အမျိုးသမီးလေးများကပင် သုံးနှစ်သုံးမိုးစောင့်၍ ဘ၀လက်တွဲဖော်ရွေးချယ်ရာ ကိစ္စကို မိမိတို့သဘောနှင့် မိမိတို့ပယ်ဖျက်၍
ဗယ်လင်းတိုင်းနေ့ညတွင် တည်းခိုးခန်းသွားပြီး မိဘတွေ ကျေးဇူးဆပ်ကြသည်….။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ခံသော မြန်မာအမျိုးသားများကလဲ နှမချင်းမစာနာစွာ ပဲ အလိုတူ မြူစွယ်ကြသည်….။
ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ဘာသာခြားကို ငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းကြည့်၍ ဘ၀ပေး ပေါင်းကြသည်…။ ကုလားလင်ဖြစ်ဖို့ထက် ကုလားမယား အဖြစ် အဖြစ်ခံနေရခြင်းက ပိုများနေသည်..။ ဒါကိုလဲ မြန်မာအမျိုးကောင်းသားကြီးတို့က နာရမှန်းမသိ လက်စားချေ ဟန့်တားရမှန်းမသိကြပေ..။ စဉ်းစားပြီးလဲ မသုံးသပ်ကြပါ…။ ကုလားမလင်၊ တရုပ်မလင်၊ နိုင်ငံခြားသူလင် ဖြစ်မှုအရေအတွက် ထက်….. ကုလား မယားတွေ…. တရုပ် မယားတွေ….. တိုင်းတပါးသား မယားတွေ …မိမိတို့ လူမျိုး အမျိုးကောင်းသမီးတွေ ဖြစ်နေကြသည်ကို အလေ့မပြုမိကြပါ....။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ကျိမ်းသေးပါသည် မြန်မာနိုင်ငံသည် များမကြာသော အချိန်ကာလတွင် တစ်ချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ် ခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံနည်းတူ တိုင်းတစ်ပါးသားတို့လက်တွင်းသို့တိုင်းပြည်ကျရောက်၍ လူမျိုးပါပျောက်ရပေလိမ့်မည်….။
မြန်မာသည်မြန်မာဖြစ်ပါသည်….။ မြန်မာသည် ကိုရီးယား လူမျိုးမဟုတ်ပါ….။ ကိုယ့်အမျိုးကိုယ့်ဘာသာဖြင့် ရပ်တည်နေ သော နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်…။ အဆင့်အတန်းရှိသော တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါသည်….။ မျိုးစစ်မျိုးမှန်တို့ ဌာနေ ဖြစ် ပါသည်…။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အဆင့်အတန်း အမြင့်ဆုံး ထိပ်သီးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သော အမေရီကန်နိုင်ငံပင် လျှင် မြန်မာနိုင်ငံလို မျိုးရိုး၊ သမိုင်းစစ်စစ် မရှိသောမျိုးမစစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါသည်….။
မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အမျိုးဂုဏ်ကို စောင့်ထိမ်းရန်မှာ မြန်မာလူငယ်တို့၏ တာဝန်ဖြစ်ပြီး….. မြန်မာ့အမျိုးဂုဏ် ယဉ်ကျေးမှုကို လက်ဆင့်ကမ်း ပေးရန်မှာ မြန်မာလူကြီးတို့၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်….။ ထိုသို့တာဝန်ကျေပွန်မှု မရှိလျှင် အမျိုးပျောက်ပါတော့မည်…။
မကြာသေးခင်ကမှ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်အဓိကရုန်းကို ကြည့်၍ သင်ခန်းစာ ယူသင့်ကြပါသည်….။ မြန်မာလူကြီးဖြစ်သောမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌကြီး က ၄င်းတို့ပါတီ အနိုင်ရရန်အတွက် မဲပေးခိုင်းပီး နိုင်ငံတွင်းခိုလှုံခွင့်ပေးခဲ့သော ဘင်္ဂါလီကုလားများ သည် မည်မျှ လောက်ထိ မိမိတို့ ပြည်ထောင်စုဖွားများကို ယနေ့ နှိပ်စက်ခဲ့ကြသနည်း…။ ဦးနေ၀င်း ဆိုသော မြန်မာ လူကြီး တစ်ဦး၏ မှားယွင်းသော လက်ဆင့်ကမ်းထိမ်းသိမ်းမှုကြောင့် ယခု အချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့ ရှင်းမရသော မလိုလားအပ်သည့် ပြဿနာ များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါ၏ ။ မိမိတို့ နိုင်ငံတွင်း လူမျိုးများ ထိခိုက် ပျက်ဆီးခဲ့ရပါသည်..။
ထို့ကြောင့် မြန်မာအမျိုးဂုဏ်ကို သေခါနီးလူကြီးများက ပို၍ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်…။ ထိုမှ သာလျှင်လူငယ်များ အတုခိုးမှန်ပါလိမ့်မည်။ရှေ့နွား ဖြောင့်ဖြောင့်မသွားလျှင် နောက်နွားလဲ ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်မည် မထင်ပါ....။
မြင်မြတ်သော အမျိုးဂုဏ်ကို အသေးအဖွဲကိစ္စမှ စ၍ မြန်မာတို့သည် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်ပါသည်…။ မနှစ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့
သော မလေးရှားမြန်မာ ဘောလုံးပွဲမှ အဖြစ်မျိုးသည် လွန်စွာ နိုင်ငံတကာတွင်း မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ပြယုဂ်သည် အကျည်းတန်စေခဲ့ပါ
သည်….။ ပွဲမစခင်က မြန်နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဖင်ကုန်းပြီး အော် ခဲ့သလောက် ပွဲလည်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အထိကရုန်းသည် လွန်စွာနိုင်ငံဂုဏ်ကို လျှောကျပျက်ဆီးစေပါသည်….။ ပရိတ်သတ်သည် အားပေးမည် ဖြစ်သည်…။ သို့သော်ထိုပရိတ်သတ်ကို ထိမ်းရန်မှာ ထိုပရိတ်သတ် ကိုယ်စားပြု ကစားသမားများ၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်…။ ယခုတော့ ထိုကဲ သို့မှ မဟုတ် ၄င်းတို့က ထိမ်းမယ်မှ မကြံ…ကိုယ်တိုင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကာ ဆဲဆိုအော်ဟစ်၍ ပရိတ်သတ်ကို ရန်မီးပွားတိုက်ခိုက်စေချင်သည် ယဉ်ကျေးသော မြန်မာ အမျိုးကောင်းသားတို့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ….. နိုင်ငံ့ကစားသမားကောင်း လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ….။
စာရေးသူတို့ အရိုးစွဲအောင် ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀မှ စ၍ ကျောင်း၌ ရွတ်ဆိုခဲ့ရသော နိုင်ငံတော် သီချင်းသည် အလကား မဟုတ်ပါ။ထို သီချင်းသည် အလွန်အဓိပ္ပါယ် လေးနက်သော စာသားများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်…။ ထို နိုင်ငံတော် သီချင်းကို ရွတ်ဆို ၍ စာရေးသူတို့ ဘိုးဘွားများသည် နိုင်ငံတော် ရန်ကို အသက်ပေး၍ ကာကွယ်ခဲ့ကြပါသည်….။ သွေးများစွာပေး၍ တည်တံ့စေခဲ့ သော မြန်မာ့နိုင်ငံတော် သီချင်း ဖြစ်ပါသည်…။
ကိုယ်မျိုး..ကိုယ်မြေမှာ ရှင်သန်နေလျှက်နှင့် မွေးဖွားလာလျှက်နှင့် မည်သို့ကြောင့် မြန်မာ များ ယခုခေတ်ကာလတွင် အမျိုးဖျက် နေကြ သနည်း…။ မိမိတို့ လုပ်ရပ်များသည် ကိုယ့်မျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံဂုဏ် ၊ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို မသိကြပေ၍လော….။ ထိုမှမဟုတ်မရှက်တတ်ကြပေ၍လော…။ ကိုယ်နိုင်ငံတန်ဖိုးကို မသိကြပေ၍လော….။ မေ့လျော့နေကြသည်လော့…။
ထိုကဲ့သို့ ဆိုလျှင်….. မြန်မာနိုင်ငံတော် သီချင်းကို သေသေချာချာ တစ်ခေါက်မျှ ပြန်ဆိုကြည့်စေချင်ပါသည်….။ “မြန်မာမျိုးဟေ့
တို့မြန်မာ” ဆိုသည့် စကားပေါ်ထွက်လာခဲ့သော အင်္ဂလိပ်ခေတ် သူ့ကျွန်ဘ၀က သခင်များ၏ ရွတ်ဆိုသံများကို ပြန် လည်ကြားယောင်စေချင်မိပါသည်…..။
In: ဆောင်းပါး Posted By: kyagee13 Date: Jul 13, 2012
Leave comment No comment & 184 views